1-Ma baxsan doontid
Kama baxsan doontid Dumliga aad dadka u maleegtay, hubaal in aadan nabad ku noolaanayn inta qof dhibaataysid.
Ha u malayn in wax walba ay caadi ahaan karaan. Ogow in Dadka qaar ay Alle tuug badan yihiin, Allena uusan soo celin ducadooda.
2-Ka cabso Dumar
Waxay ahayd afar sana ka hor malxiisadda saaxiibteed, maantana waa minyaradeeda. Shalay waxay ahaayeen kuwa dadka iskugu jecel, maantase ma aqaan wax aan ku macneeyo, laakin waxaan ogahay in ay hal qoys iyo hal nin u wada dhaxaan.
Haddii lagu dhaho qiyaas xaaladda labadaas dumar dareen ahaan maxaad ku qayaasi lahayd?
Ka cabso dumar!!!!!
Aan kuugu hormariyo hadalka Eebe ee dhahaya ” (إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَیۡنَ أَن یَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَـٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومࣰا جَهُولࣰا)”
4-Maka dhaadhicin karnaa?
Ma ka dhaadhicin karnaa jiilkeena soo koraya in qofkii gaari haystaa uusan astaan u ahayn qof nolosha guul ka gaaray ama qof ladan, sidoo kale kan lugaynayana uusan la mid ahayn Faqri ficiis ka haray.